🥇 ▷ OPPO A5 (2020): afarta kamaradood waxay kusii dheereyaan bartamaha dhexe ee OPPO ✅
OPPO A5 (2020): afarta kamaradood waxay kusii dheereyaan bartamaha dhexe ee OPPO
In kasta oo OPPO ay xoogga saartay inta badan dadaalkeeda khadkeeda Reno (caddeynta tani waa taxanaha cusub ee OPPO Reno2 oo ka kooban saddex moodal), Ma uusan iloobin inta kale ee buuggyaraha uu haystay. Sidaa daraadeed, si la mid ah sida aan horeyba u ognahay beddelka OPPO A9, OPPO A9 (2020), shirkadda Shiinaha waxay sidoo kale soo bandhigtay jiilka xiga ee OPPO A5.
OPPO A5 (2020) cusub kama badna mana ka yaraanayo mataanaha walaal ka ah OPPO A9 (2020), maxaa yeelay waxay wadaagaan astaamo badan oo ay ka mid yihiin: 6.5-inji shaashad ah, processor Snapdragon 665, batteriga mAh 5,000, afar-muraayad gadaal ah… Aad u fudud: qaraarka kaamirooyinkaaga iyo fursadaha RAM ee la heli karo.
OPPO A5 xaashi xog (2020)
HD + qaraarka (1,600 x 720 pixels)
64 GB / 128 GB (oo lagu daray micro SD ilaa 256 GB)
12 MP f / 1.8 + 8 MP f / 2.25 + 2 MP f / 2.4 + 2 MP f / 2.4
Dual SIM, BT 5.0, Micro USB, aflagaado stereo stereo, akhristaha faraha gadaal gadaal u akhriya
Kaameeraha Quad iyo 5,000 mAh batteriga
OPPO A5 (2020) cusub wuxuu la wadaagaa astaamaha walaalkiis A9 (2020), laga bilaabo Shaashadda 6.5-inji leh HD + xalka (1,600 x 720 pixels), feejignaanta qaababka qaabkeedu yahay iyo 89% saamiga hore ee shaashadda. Gudigaasi wuxuu kaloo bixiyaa isbarbardhig 5000: 1 iyo iftiin waxyar ka hooseeya kan kale: 480 nits.
Waxay sidoo kale wadaagaan processor, the Qualcomm Snapdragon 665 oo ay la socdaan Adreno 610 GPU iyo Game Boost 2.0 tikniyoolajiyada, laakiin kiiskan waxaan ka helnaa ** laba ikhtiyaar hoose oo RAM ah (3 iyo 4 GB) iyo laba ikhtiyaar oo kaydinta gudaha ah: 64 iyo 128 GB, labada xaaladoodba waa lagu fidin karaa kaarka micro SD micro. ilaa 256 GB.
Astaamaha kale ee ay labada moodel wadaagaan waa akhristaha farta sawir qaadaha oo ku yaal gadaal, aflagaadada stereo labajibbaara ee ay la socoto Dolby Atmos iyo batteriga weyn ee 5,000 mAh, kaas oo la jaan qaadi kara kaydinta gadaal, waxay u ogolaataa dib u soo celinta aalado kale. Dekadda USB USB micro iyo nidaamka hawlgalka ColorOS 6.1 ee ku saleysan Android 9 Pie ayaa dhammaystiraya waxyaabaha la midka ah.
Qalabka sawirku waa meesha aan ka helno farqiga weyn marka loo eego OPPO A9 (2020). Labaduba waxay leeyihiin a kamarad gadaal ka kooban, laakiin marka la eego OPPO A5 (2020), dareeraha ugu weyn wuxuu leeyahay xallinta ugu badan ee 12 MP, halkii laga dooran lahaa 48 MP uu soo bandhigay walaalkiis ka weyn. Saddexda kale ee dareemayaasha ah (8 MP + 2 MP + 2 MP) oo leh xagal ballaadhan oo 117-digrii ah, Flash flash iyo Ultra Night Mode 2.0 hab sawir sawireed habeenkii ah ayaa la ilaaliyaa.
Kaameeraha hore, wax la mid ah ayaa dhaca: OPPO A5 (2020) waxay sidoo kale isku daraysaa hal xasaasiyadeed oo leh f / 2.0 aperture iyo Hawlaha Sirdoonka ee Farshaxan loogu talagalay qaabka quruxda, laakiin qaraarka hoose ee 16 MP ee A9 badh ahaan, 8 MP.
Aayadaha iyo qiimaha OPPO A5 (2020)
OPPO A5 (2020) waxaa lagu iibin doonaa labo nooc oo kaladuwan iyadoo ay kuxirantahay RAM (3 ama 4 GB) iyo kaydinta gudaha (64 ama 128 GB). Waxaa laga heli karaa gudaha laba midab oo jilicsan, Mirror Black iyo Dazzling White, qiimo aan wali la xaqiijin astaanta. Waqtigan xaadirka ah, taleefanka wuxuu ka muuqdaa websaydhka OPPO Pakistan, laakiin lama oga inuu gaarsiin doono dalal kale.
La wadaag OPPO A5 (2020): afarta kaamirooyinka ayaa lagu dheereynayaa bartamaha-dhexe ee OPPO